Ọrụ na Mumbai maka HR - Gọọmenti - Banking na IT openings India
Ọrụ na Dubai Maka ndị mba ọzọ
Ọrụ na Mumbai
Ọrụ na Mumbai ka esi achọta ha ?. Iji kwu eziokwu, ụlọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na India. Yabụ, na nke a n’uche, anyị kpebiri inyere ha niile aka. N'oge a, ndị otu anyị etinyela ozi zuru ezu. Na mpempe esi enweta ọrụ na Mumbai mpaghara. Anyị jiri Mumbai tụnyere Dubai. N'iburu nke a n'uche, anyị na-atụ anya inyere ndị na-achọ ọrụ aka. Na ogologo oge ndị na-achọ ọrụ na-eji ndụmọdụ anyị. Maa, chọta ọrụ na Mumbai Mpaghara. Isi anyị na-elekwasị anya na ọ ga-abụ Ọrụ na Mumbai. Na ọdịiche dị n'etiti ụdị ohere ahụ. Debanye aha gị na ndị India kacha mma saịtị ọrụ. ma chọpụta otu esi amalite ọrụ na India. N'aka nke ọzọ, anyị na-akpọ ndị si India ka ha soro anyị soro anyị ọrụ ntinye emelitere ọhụrụ.
Enwere ọtụtụ ndị isi gụrụ akwụkwọ. N’iburu nke a n’uche, otu anyị bidoro tinye ọtụtụ isi na edemede. Ọmụmaatụ ndepụta zuru oke nke saịtị ọrụ na Mumbai. Maka ndụmọdụ maka ndị na-achọ ọrụ na Mumbai. Ọzọkwa, ọrụ kachasị mma enwere na India. Ndi ugbu a na nnukwu obodo dị ka Mumbai. Ọ bụ nke a mere ndị otu anyị na-etinye edemede a ji nwee olile anya inye gị ihe ọmụma zuru ezu. Naanị igosi gị ohere nke ịrụ ọrụ na Mumbai. N'aka nke ọzọ, enwere nnukwu ohere. Maka ndị isi na India iji mee ka ndụ ka mma na Mumbai. Nke a bụ ihe mere anyị ji agbalị ịkụzi gị n'okpuru.
Ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ na Mumbai
Anyị bụ ugbu a inwe ọtụtụ ụlọ ọrụ si India. Anyị na-elekwa anya ịkwaga n’ahịa ọrụ India. Ndị otu anyị na-achọ inweta nhaghachi azụ na Mumbai. Na ndị na-eme ebe a. N'ezie nwere ike nweta ọrụ na ụlọ ọrụ anyị. N'ihi na nzube nke ịchọ ọrụ. Nnweta anyị ụlọ ọrụ kachasị elu na India. Ya mere, ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ ga-achọ ọrụ ọrụ anyị. Ebe ọ bụ na anyị na-amalite ịrụ ọrụ na India. Ndị ọrụ gọọmentị anyị agbanweela ụlọ ọrụ anyị. Otu n'ime ihe atụ bụ otu nnukwu ụlọ ọrụ mba ụwa maka Mumbai.
Kemgbe afọ 20 ikpeazụ Mumbai obodo ukwu. Bụrụ ezigbo ebe a na-achọkarị maka ndị isi ụlọ ọrụ. N'ihi otutu ihe European na ụlọ ọrụ UAE nwere ụlọ ọrụ na-aba ụba. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, anyị na-etinye ndị na-achụ nta ọrụ. Anyi na-anwa imebi njikwa HR banye ụlọ ọrụ azụmahịa mba ofesi. Ma maa isi obodo azụmahịa nke mba India. Ịghọ ezigbo ewu ewu. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ ndị isi. Na-eduga n'ịbawanyewanye ewu na ndị ọgbọ. Karịsịa site n'akụkụ nile nke ụwa.
Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ Dubai City Company. Inyere ndị na-achọ ọrụ n'aka India. Anyị bụ echere CV gị. Naanị ndị na - achọ ọrụ ọhụụ. Nwere ike bulite CV na weebụsaịtị anyị. Na ichere maka oru ohuru na Mumbai. Obodo obodo Mumbai bu Obi abụọ adịghị ya na isi maka ọrụ. N'iburu nke a n'uche, ndị India kachasị nwee obodo ọrụ maka ọrụ. Obodo a nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu. Nke a bụ ya mere anyị na-etinye ndị mmadụ n'ọnọdụ ọrụ ọhụrụ kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị ọrụ n'obodo a dị mma. Ọ nwere ndụ ndụ dị mma maka ndị obodo. N'oge gara aga, ụlọ ọrụ anyị nyere ihe karịrị iri puku ndị na-achọ ọrụ na Mumbai.
Ebee ka anyị nwere ike inyere gị aka inweta ọrụ?
Ndị na-ahụkarị ndị ọrụ achọta ọrụ n'obodo ukwu. Obodo kachasị mma bụ Mumbai. Maka obodo a nwere ụdị dịgasị iche iche nke ohere. Ọzọkwa, ndụ dị ezigbo mma na n'ogo dị elu. E nwere ohere ọ bụla. Karịsịa maka ndị na-achọ ọrụ. Site na akụkụ dị iche iche nke Obodo. Iji nweta ọrụ na Mumbai. Ikwesiri ka gị na ndị nwere ụdị ọrụ azụmahịa nwee mkparịta ụka. N'inwe ọnọdụ mmekọrịta dị elu dị ka nke ọma yana, ihe ọmụma banyere ego na ọdịbendị. Nke a enyere gi aka iru ndi oru ndi ozo.
Maka akụkụ kachasị, ìgwè anyị na-arụ ọrụ na ọkwa nchịkwa ọ bụla. Oge ụfọdụ anyị na-enyere aka ime njem. Na ibikọ na ndị na-achọ ọrụ. Na-eme ụlọ ọrụ anyị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu kachasị ewu ewu maka ndị India. Yabụ, anyị nọ ebe a nyere gị aka n'isi obodo kachasị elu n'ụwa. anyị ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ. Site na akwukwo ohuru rue ndi isi oru. Onweghi ihe anyi choro ka isiri jiri okpukperechi. Ma ọ bụ ahụmahụ ị kwupụtarala na ahụmịhe gị na Mumbai. Anyị dị njikere itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-achọ ọrụ ọ bụla.
Anyị na maka ọrụ nyocha na Mumbai
Enwere otutu ohere ka anyi na-enye. Karịsịa maka ndị njikwa mma. Yana ndi isi IT na ahia. N'ihi na ebumnuche anyị bụ ime ka ị nwee ndụ ọhụrụ na Mumbai. Anyị otu na-arụ ọrụ na ndị na-ekpofu ihe. Na ọtụtụ n'ime ha na-atụ anya, ịpụ maka ọrụ ọrụ ọhụụ. N'iburu nke a n'uche, anyị na-etinye ha n'ime ebe nkasi obi ha. N’ezie, nke ahụ ga-enyere ha aka na enweta ahuhu akahu ohu.
Ọ bụrụhaala na ị nọ n'India. Ndị otu ọkachamara anyị, tinye gị n'ọrụ ọhụrụ. N'ime ọkwa ọhụrụ nke arụ ọrụ. Ga-aga n'ihu n’ihu iji gaa Mumbai ọganihu ọrụ. Yabụ, ndị otu HR anyị na-ekwe nkwa mmetuta ahụ. Na-arụ ọrụ na-enye nke a na-agaghị ewu na Mumbai.
Ọrụ kacha elu na Mumbai ị kwesịrị itinye!
Arụ Ọrụ Akaụntụ na Mumbai No.1
Dị ka onye isi ọrụ ego, ọtụtụ ọrụ na-elekọta kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, na-enye ozi ego. Ijikwa akụkọ zuru ezu ma nye ya management. Ọzọkwa, mgbe a ga-eme ya n'ụzọ zuru oke. Onye na-edezi ego ga-eme nyocha maka akụkọ. Ma nyochaa data gbasara akaụntụ. Na na njedebe na-akwadebe akụkọ na-eziga ya site email. Ọrụ a siri ezigbo ike ijikwa. N'ihi na ebe a na mmadụ ga-akwadebe ihe bara uru. Na-agba mbọ hụ na a na-achịkọta ụgwọ ahụ. Ọzọkwa, ichikota na nyochaa ozi gbasara ego. Ma n’otu oge. Ikwesiri ijide n'aka azụmahịa azụmahịa na akwụkwọ na-ezi ezi mgbe niile.
Kwa izu, yana kwa abalị. Na njikwa njikwa chọrọ ichikota ọnọdụ ego ugbu a. E mesịa n’egbughị oge ịnakọta ozi ezigara. N'iburu nke a n'uche, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-akwadebe mpempe akwụkwọ. Na nke ahụ bụ akụkụ kachasị njọ na ọrụ ndị a. N'ihi na ha enweghị ike imehie ihe. Naanị n'ihi nkwupụta uru na ọghọm ya. Ọ dịghị mgbe ha nwere ike mejọọ. Na n'ezie na akụkọ ndị ọzọ ka emepụtara.
Arụ ọrụ ọrụ nchịkwa No2 Backpack na Mumbai
Ọrụ ụlọ ọrụ azụ bụ ụdị ọrụ ọzọ. Yabụ, ọ bụrụ n’ị na-achọ ịgwa mmadụ okwu. Banyere ụdị ọrụ a. Kwesịrị ka gị na ọtụtụ ndị isi azụmaahịa mata ọrụ kwurita okwu. Dịka ọmụmaatụ na ndị isi ụlọ ọrụ n'ihu. N'ihi na ha nwere ike nwere aro ole na ole maka gị. Ihe kachasị ewu ewu bụ ọrụ nchịkwa ọrụ yana ọfịs dị n'ihu na ọnọdụ ntinye data. Enwerekwa ọtụtụ oghere maka Freshers dị ka onye nnabata na nhazi nke ndị ahịa lekọtara ọrụ ọfịs.
Ọrụ azụ azụ n'obodo Mumbai. Ohaneze na -ekwu okwu mejupụtara mpaghara nke nnukwu ụlọ ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ụdị ọrụ a anaghị enweta ego ha ga enweta. N'ụzọ ụlọ ọrụ na-ahụ nke a na ndị ọrụ. Onweghi ihe ngosi a maka ndi ahia ma obu ndi isi oru. N'akụkụ aka nke ọzọ, nye nkwado na nhazi dị ezigbo mkpa. Karịsịa maka ndị isi ọrụ ọkwa. Ọrụ nzụkọ azụkọ na Mumbai nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mmadụ nwere ike arụ ọrụ na ngalaba dika Teknụzụ Ozi. arụ ọrụ ụlọ ọrụ. N'ihe gbasara nnyemaaka, nyocha, na nrube isi.
Ọrụ Ndenye Bank No.3 na Mumbai
Ọrụ na Banking na Mumbai. Eziokwu nwere ike ịbụ enwere ike maka ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ. N'okpuru otu ndi otu anyi ha etinyela banki nke 10. Dịka nke eziokwu, ịkwesịrị ịmalite na akụ ike. N'akụkụ aka nke ọzọ, ebe ị na-arụ ọrụ ga-azụlite otu nwere ịnụ ọkụ n'obi iji soro ya rụọ ọrụ. Ma enwere nnukwu ohere maka ndi na acho ndi India. N'ihi na ụlọ ọrụ ego India na-arụ ọrụ na ationwa. Yabụ, ọ bụrụhaala ị na-arụ ọrụ. Banklọ akụ nwere ike izigara gị Dubai dị ka onye njem. Ma ọ bụ ọbụna na United States America na Canada. N'akụkụ aka nke ọzọ, Ndị ọrụ ọkachamara na India. Kpebisiri ike imezu ọhụụ maka ọrụ nke aka ha. N'ezie, malite ọrụ na ọwa mmiri India.
Ufodu ihe omuma ahia ulo oru ego na-adabere na onodu ndi siri ike. Otu n'ime ihe omuma atu bu oru nke oma. Ọzọkwa, onye ahịa ahụ zuru oke na-elekwasị anya na ire ahịa obe. N'akụkụ dị mma, igosi ndị mmadụ ụlọ akụ na-arụ ọrụ dị mma. Ma n'ezie ihe kachasị mkpa maka ọrụ ụlọ akụ bụ onye ndu. Iji maa atụ, ijikwa ndị mmadụ ikepụta ihe na ọrụ kwa ụbọchị yana ọfụma. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị, maka nke a, bụ kpebisiri ike inyere gị aka ịgoro ọrụ. Na nke a n'uche, ịzụlite ihe ọmụma gị. Ọzọkwa, na-akpali ma na-ejide ndị kasị mma na ụlọ ọrụ India. Biko lee anya maka ụlọ ọrụ ego na Mumbai.
Ihe Nlekọta 10 Bank Care Center weebụsaịtị:
Bank State nke India Ọrụ
Ihe gbasara ohere HDFC Bank
Ngalaba nchịkwa Bank Bank nke Punjab
Axis Bank Care website
Ọrụ na Canara Bank
Bank of Baroda Jobs Opportunity
Ịnweta ego nke Union Bank
Ọrụ na IDBI Bank
Bank of India Career website
Arụ ọrụ ntinye data N4 na Mumbai
Ọrụ ntinye data, ikwu okwu n'ozuzu, ụdị ọrụ ọzọ maka ndị India. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ anyị, gbakwunye ụdị ọrụ a na ndepụta anyị. Ọnọdụ ịbanye na data na-ekwu maka onye otu ndị ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. N'ezie, ọ bụ ọrụ na-agwụ ike ná mmalite. Ọrụ bụ isi bụ ịtinye ma ọ bụ melite data n'ime sistemụ kọmputa. Wee jide n'aka ọ na - emelite ya ma debe ya nke ọma. Na-ekwukarị, data nke ndị njikwa nyere. N'ọtụtụ oge abanye kọmputa. Na 90% na-esite na mpempe akwụkwọ. Yana ozi ịntanetị na akụkọ banyere bọọdụ ahụ. Yabụ, nke a bụ ohere zuru oke maka ndị ọrụ ruru ala. Ọzọkwa, ndị na-arụ ọrụ nwa oge nwere ike ime ya dị ka ọrụ kwa ụbọchị.
Ndị na-achọ ọrụ karịsịa otu na mmalite nke ọrụ. Site na oru ndi ntinye data. Na iji keyboard ga-abụ ihe ị na-eme kwa ụbọchị. N'akụkụ na-adịghị mma, enwere nyocha nyocha nke aga-eji tinye ebe ndị na-edekọ data. Ọnọdụ ahụ na ọnwa isii mbụ na-ewere ọtụtụ mbọ. Ma n'ezie ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ na-achọta ọnọdụ a na-agwụ ike. Yabụ, otu anyị na-adụ ọdụ maka ọrụ ọhụrụ na India. Ma ekwesịrị ịgbakwunye ọrụ a naanị maka ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ ọhụrụ. Maka na ndị nwere ezigbo ahụmaja nwere ike ikwu na ọ bụ ihe siri ike ịnagide ya. Ma ọ bụghị ibu ọrụ ka ọ dị ala. Dị ka ihe niile aghaghi idozigharị maka usoro ụlọ ọrụ dị mma.
Ọrụ Nlekọta Ọrụ Nzube N5 na Mumbai
N'agba nke ise, anyị na-arụ ọrụ gọọmentị na Mumbai. Kinddị ụdị ọrụ a bụ nke kachasị maka ndị isi ọrụ nwere ahụmahụ. N’aka nke ozo, ichota ndi ohuru Ọrụ gọọmenti na Mumbai. Nwere ike ịdị egwu. N’akụkụ dị mma, enwere ọrụ maka onyinye nke 10 / pass pass 12. Ọzọkwa, ohere ọrụ dị mma maka ohere dị ogologo. N'ihi ya, a chọrọ ọkachamara na IT-Software maka nkwekọrịta ogologo oge. Ndị India gọọmentị na-enye ohere ọrụ dịka injinia nakwa ndị isi ụlọ ọrụ. Ya mere, n'okpuru ọnọdụ ndị a, ndị na-achọ ọrụ nwere ike ịhọrọ site n'ọtụtụ ọrụ n'ọfịs Gọọmentị.
Ụlọ ọrụ weebụ anyị na-edekwa gbasara akwụkwọ ọrụ Govt. N'iburu nke a n'uche, anyị na-ele anya inwe otu ndu maka ndị na-achọ ọrụ si Mumbai. N'ikwu okwu n'ozuzu, Dị ka oge niile, ndi otu anyi na - achikota ihe ochichi maka ndi anakpo. Ọzọkwa, ndị ọrụ anyị na-achọ ụdị ọrụ a kwa ụbọchị. Dị ka ogologo dị ka ndị mmadụ na-eji saịtị ọrụ anyị. Kpamkpam chọta ezigbo ihe ọmụma banyere ọrụ gọọmentị na Mumbai. Dịka eziokwu, anyị na-achọ ịchọta ndị na-achọ ọrụ. Maka mmeghe ọhụụ na ngalaba gọọmentị Maharashtra. Enwere nnukwu ohere ebe ahụ. Ọrụ gọọmentị etiti, dịka ọmụmaatụ, UPSC na SSC na-etolite na ihu. Ọhụrụ ohere na-eto eto kwa ụbọchị. Na agbakwunyere na ndị nlekọta Govt dị na KPSC na MPPSC. Ha abụọ dị njikere ịrụ ọrụ maka ndị na-aga n'ihu na India.
Ndi oru gọọmentị na ohere ọ ga-efu ya?
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-arụ ọrụ ọkọlọtọ. Ọrụ gọọmentị kwesịrị ka ị nweta n'oge ọ bụla. Ebe ọrụ anyị bụ ojiji kachasị mma maka iji nweta ndị ọrụ. Karịsịa smart kwụsịrị maka ọhụrụ mbanye gọọmentị ọrụ. Ndị otu anyị gafere n’ọrụ dị iche iche na ngalaba dị n’India. Yabụ, chọta ụgwọ kachasị ụgwọ kachasị mma govt jobs na Mumbai. Arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị, ọ bara uru ijikwa. Kemgbe oru ohuru, a gha amalite ya. N'ime otu nzukọ gọọmentị. Ọnọdụ gị amalitela ibili na ugwu ugwu ga-eto.
Enwere ọtụtụ ọrụ gọọmentị Mumbai dị maka ndị chọrọ. Na-ekwukarị, ụdị mmụta dị iche iche nwere ike inyere ndị mmadụ aka inweta ọrụ. Ọbụna ịrụ ọrụ na ndị agha Indian ma ọ bụ ụlọ ọrụ nkwekọrịta nwere ike ibute ụdị ọrụ a. N'akụkụ dị mma ọzọ, isi ọrụ ọrụ gọọmentị a buru ibu. Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ n'ime ọrụ dị iche iche na-enye ịgụnye ịkwụ ụgwọ nnukwu ụgwọ ọnwa. Mgbe niile n’oge, n’enweghi oge ọ bụla. Ọzụzụ n'efu na ụlọ ebe a na-eme egwuregwu na ọzụzụ. N'akụkụ na-adịghị mma, mgbanwe dị ala na ọrụ. Ma akụkụ bụ isi bụ nchekwa ọrụ zuru oke na ụlọ ọrụ mgbe ezumike nká. Na n'ezie ezigbo ụgwọ ezumike nká mgbe oge ụfọdụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ bụ afọ 25 ruo mgbe ezumike nká.
Hụ ụdị ọrụ gọọmentị na ohere ị ga-enweta?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ọtụtụ ọrụ Govt dị n'obodo Mumbai na-akwụ ụgwọ nke ọma. Imirikiti ọrụ ndị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ karịrị nke ndị ọrụ onwe. Nyere isi ihe ndia, inweta onyinye ndi ochichi kachasi elu. Yiri ka ọ siri ike ma ọ gaghị ekwe omume ọfụma karịsịa na Mumbai. Iji maa atụ, Anyị etinyela ọtụtụ ọrụ gọọmentị n'okpuru.
Na-arụ ọrụ dịka ndị isi obodo
Kwuo ọrụ ọrụ ọha na eze
Air India Chemicals ọrụ
Ndị isi dị ka nri Fertilizers Ltd
Mahadum Mumbai dị ka prọfesọ
Onye Ọchịchị Gọọmentị ma ọ bụ Ọkà Mmụta Ọchịchị Govt
Ọrụ nchebe dịka Agha, Mmiri na ndị na-eche nche n'ụsọ oké osimiri
Onye na-arụ ọrụ ntuziaka nke India
Onye ọkachamara n'ịchọta ego mkpuchi ego
Ndị dọkịta India na ndị nọọsụ
Agbanyeghị, ngwugwu ọrụ a kwụrụ ụgwọ abụghị ihe ndabakọ. Ndi Newbies kwesiri iwere aka ha ma nara oru ha. N'ikwu okwu n'ozuzu, iji nweta ezigbo ọhaneze n'etiti ndị gụrụ akwụkwọ na India. Onye ohuru agha aghaghi imezu otutu nkuzi na mmuta. Dika odi, otutu n’ime ha siri ike karie ka ichere. Karịsịa na lacs nke ahụmịhe na mbido. Nwere ike duru ndị ọrụ ọhụụ ga-eme nyocha ụzọ mbata kwa afọ. Iji bụrụ onye ọrụ gọọmentị na-aga nke ọma na Mumbai. Mmadu aghagh i bido ime nkwadebe maka udiri uzo ndia afọ ole na ole n'oge.
No6 Ọrụ Nlekọta Mmadụ na Mumbai
Dika onye okacha amara nke ndi mmadu. N'ime ụlọ ọrụ ọ bụla, ị ga-enwe ọtụtụ ohere ị ga-aga. Ọzọkwa, oghere a nwere ọdịnala ha pụrụ iche. N'ihi na ya na mmadụ na-arụ ọrụ. N’iburu nke a n’uche, ihu na iru seams dị ka echiche amamihe. N'ihi na ị nwere ike ịgụta ụkpụrụ nke onye a gbara ajụjụ ọnụ. Gbaa mbọ hụ na a na-eji ọhụụ atụnyere echiche na ụkpụrụ. Karịsịa maka ọnọdụ nchịkwa n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Tupu akwụkwọ ozi ahụ ga-enye. Onye ahu kwesiri ilele asusu ndi oru ozo. Maka na ọ ghaghị ịgbaso nduzi azụmahịa.
N'akụkụ dị mma, ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere usoro na omume. Buru nke a n'uche, otu ndi mmadu ndi nwere otu echiche nwere ike ijikota onu. Otu n’ime ihe ndị dị mkpa mgbe ị na-arụ ọrụ n’ọkwá a. Ọ bụ maa zụlite ezigbo ndị ọrụ ego. N'ebe ọ bụla, ndị ọrụ ọhụrụ na - azụlite ma na - elekọta ọdịbendị ụlọ ọrụ ahụ dum. Ndị ọrụ gọọmenti na Mumbai na-azụ ndị India ọhụrụ. Tinyere ịnọgide na-enwe uru na ịkwụ ụgwọ na ụfọdụ.
N’aka nke ozo, kpezie n'etiti esemokwu a ma sonye na ọzụzụ na mmepe. Agaghị abụ ọrụ dị mfe iji hazie karịsịa na India. Mana Ọrụ ọrụ mmadụ bụ isi ihe na-aga nke ọma n'ụlọ ọrụ. Ma n’agbanyeghi ihe oga eme. Onye a na-ahụ maka ịnwe ndị ọhụụ na ụlọ ọrụ. N’ezie, nwee mmetụta siri ike nke ọhụụ ụlọ ọrụ n'ọdịnihu na mmepe.
Kedu ihe bụ isi ọrụ nke Ndị ọkachamara akụ na ụba mmadụ?
Ihe nchịkwa mmadụ / HR onye / nwere ndị ọkachamara ma ọ bụ ọnọdụ nchịkwa. N’ezie, ọrụ ndị kacha dịrị mkpa bụ ịbanye n’ozi na inyocha CV ozugbo. Gbalịsie ike hụ na ị na-achọpụta ihe ndabere. Mgbe ah nyochaa na itinye ndị ọrụ aka. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-agba ụgwọ ọrụ. Onye nchịkwa HR na-enyeghachi nzaghachi mgbe niile. Ọzọkwa, na-ejide n'aka mgbe niile na ndị ọrụ ga-esochi ọzụzụ. Ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa/ onye ọrụ. N'ezie, na-elekwasị anya n'otu mpaghara mmepe.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwe ọzụzụ na ọzụzụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ naanị obere ihe achọrọ iji aka. Karịsịa na nnukwu obodo dị ka Mumbai. A ga-enwe ọtụtụ mpaghara na ihe aga-eme aghaghi ime Ngwa ngwa o kwere mee. Companieslọ ọrụ dị obere na Mumbai obodo. Ga-emecha nwee otu ma ọ bụ abụọ Onye njikwa ma ọ bụ ndị ọrụ nchịkwa. N'aka nke ozo, nnukwu ulo oru ndi nwere otutu ndi isi oru HR. Na ịgbalị ime ya na mpaghara na ọrụ dị iche iche. Yabụ, n'eziokwu, ọ dị gị n'aka ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi ọrụ nhazi nke nzukọ. Site na onwe gi dika onye isi oru. Ma ọ bụ ijikwa nnukwu ụlọ ọrụ iji enyemaka.
No7 Employment na IT ngalaba Mumbai
The IT ọrụ na Mumbai. Yabụ, ka anyị bido na oghere ndị na-akwado IT. Kemgbe ị na-amalite n'ụdị ọrụ a na India. 'Ll ga-abụ akụkụ nke ihe owuwu teknụzụ Ozi na nnukwu ụlọ ọrụ. N’aka nke ozo, enwere uzo buru ibu na India maka ndi okacha mara kompeni. Dịka eziokwu, ụlọ ọrụ kachasị elu na India. Na-achọ ọkachamara na IT kwa ọnwa, ụbọchị na izu. Yabụ, ọ bụrụ n’ịrụ ọrụ na ọrụ nkwado teknụzụ. Inwe ọrụ dị n’ọrụ IT na Mumbai kwesịrị ịrụrụ gị ọrụ.
Enwere otutu ohere. Malite dị ka ihe na-arụ ọrụ ọhụrụ ma ọ bụ dịka onye ọrụ enyemaka. Na mmalite ka ị ga-abụ ezigbo ọrụ ohere maka gị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịnwe ahụmahụ zuru ezu. Ị nwere ike ịmalite na mpaghara dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, nlekota na idebe usoro kọmputa. Otu n'ime ihe atụ bụ usoro Linux yana ịmepụta netwọk na sava. Ọzọkwa, ijide n'aka na netwọk na-arụ ọrụ nke ọma. Karịsịa n'ime ụlọ ọrụ dị na nzukọ ahụ.
Ndị na-akwọ ụgbọ ahụ bụ akara n'ihu. N'ihi na oge ọ bụla onye nyocha IT chọrọ iji aka ya na ndị ahịa ọhụrụ. Na eziokwu, ọtụtụ n'ime ha, agaghị enwe ihe ọmụma zuru oke banyere nsogbu ahụ. Ma n'ezie, ha ga-enwe nsogbu ndị ọkachamara. Imirikiti ihe ndị nkịtị na-eme bụ echefu okwuntughe, faịlụ na-ebugote ma ọ bụ okwu email. O nwere ike ọ gaghị abụ ọrụ kasị mma. Karịsịa na mmalite. Ma na ogologo oge, n'ime ọtụtụ afọ. Njikwa IT kwesịrị ekwesị na Mumbai ga-eme ezigbo ego.
Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ime iji nweta ọrụ na Mumbai?
Ebe kachasị ọrụ na Mumbai
N'akụkụ a, ndị na-achọ ọrụ na-achọpụta ihe na-adọrọ mmasị. Otu n'ime ha bụ ụlọ ọrụ kachasị mma. Ebe ndi n’achọ oru n’achọ ndi oru. Deba aha ha nkọwa maka ozi emelitere. Na nzụlite, ndị na-achọ ọrụ kwesịrị ịdebanye aha profaịlụ ha maka ihe ngosi ọrụ. Ọbụna akwụkwọ ịkpọ oku email ole na ole dị mfe maka isonye nwere ike inye aka. N'ihi na onweghi onye ma mgbe achọrọ n'ọrụ.
No.1 NaukriGulf ọrụ na Mumbai
NaukriGulf ke India. Otu n'ime ọrụ kacha mma na India. N'oge ahụ otu n'ime ndị kasị mma maka ndị na-achọ ọrụ mpaghara. Na yana ezumike mba nke mba na ahụmahụ ahịa. Ọtụtụ n'ime ndị dị njikere isonyere ha. N'ezie ịchọta ọrụ na-adọrọ mmasị na Mumbai. N'oge ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nyere ọtụtụ ndị dị iche iche. Ọzọkwa, ndepụta nke ụlọ ọrụ kacha elu na-arụ ọrụ na Mumbai.
No2 Olx maka ọrụ na Mumbai
ọzọ ọnụ ụzọ maka ndị India na-achọ ọrụ. Ọ bụ OLX India. Na Olx Mumbai yana Olx Delhi. N'aka nke ọzọ, ọbụna Olx Pune kwesịrị inyere gị aka inweta ọrụ. Ya mere, na nke a n'uche, a ghaghị ịmara ndị ọbịa ọhụrụ. N'ihi na ọ bụ onye ọ bụla ka ọ bụrụ na ọ bụ onye ọ bụla. Ọzọkwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-enye ha niile India. N'aka nke ọzọ, ndị mmadụ na-amalite ịzụ na ire. Ihe ndị dị n'ime ụzọ kachasị mfe. Mana ụlọ ọrụ ọ bụla na-eweta ọrụ ọhụrụ.
No.3 QuikrJobs Job Tinye
Ngwa ngwa ọ bụ maka ndị India. Buru nke a n’uche ndi n’acho oru. Izipu profaịlụ ha. Na-ele anya inweta ọrụ na Mumbai. Site na telesales, nnabata na IT nwere ahia. Ọrụ niile a na-enye dị. Ọrụ ọhụrụ a na-enye sikwa n’obodo dị iche iche. India na ala ịta ahịhịa ya niile nwere ikike MBA.
No.4 N'ezie ụlọ ọrụ
N'ezie, n'eziokwu, na-akwụkwa na Mumbai. Na otu n'ime ọrụ kachasị mma Injin dị n’ụwa. Yabụ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na Mumbai. Kpọtụrụ, nwee anya n'okpuru. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ otu n'ime saịtị ọrụ na ntuziaka kachasị mma maka Pakistani na India. Yabụ, n'eziokwu, ọ bụ Mumbai ka ekpuchiri ekpuchi.
Ọrụ ntinye ọrụ ọrụ nke ọrụ Ndenye ọrụ Ọrụ Ndenye
Ọrụ na India, dịka eziokwu, ọrụ na ụlọ ọrụ India bụ otu n'ime ndị kacha mma. Ndị na-achọ Job nwere ike ịchọta ọrụ ndị na-adọrọ mmasị. N'akuku ihu, enwere otutu ntule ntule. Enwere otutu otutu akwukwo ahia. Nakwa usoro nhazi ebe. Ya mere, anyị bụ n'ezie na-adụ ndị na-achọ ọrụ ka ha gaa n'ihu na ụlọ ọrụ a. Weghachite wee maliteghachi ọrụ ntanetị.
No6 Monster ọrụ ọrụ
Monster India bụ otu n'ime ama ama. Na ụlọ ọrụ kachasị mma. Nke a bụ ebe ọrụ maka ndị na-achọ ọrụ India. Monster.com nye ọrụ na inweta ọrụ. Kpamkpam na-enye profaịlụ dị mkpa nye ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị isi ego. Anyị kwenyere na ha na-enweta ọrụ ndị dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ na Mumbai yana Delhi na Bangalore na Doha. Ọzọkwa, ha na-arụ ọrụ na Chennai, Pune na Kolkata.
Arụ ọrụ N7 Mumbai na Glassdoor
Glassdoor n'eziokwu bụ otu n'ime ụlọ ọrụ 10 kacha elu. Dịka eziokwu, ịnwere ike ịchọ ọrụ na Mumbai. N'ikwu okwu n'ozuzu, Nweta ọrụ kwesịrị ekwesị na Mumbai. Kwesịrị ịbụ nsogbu na ụlọ ọrụ a. N'ihi Glassdoor guzosiri ike rue ugbu a, na-eduzi Fim na ụgwọ. A na-emeghekwa ọrụ ndị ọhụrụ na obodo ndị dị ka Mumbai. Ya mere, gbalịa ka ha soro ha goro ego.
No.8 Na Shine.com e nwere ihe karịrị 18k Ọrụ
Ejiri ọrụ 18,000 arụ ọrụ na Mumbai. Ndị ụlọ ọrụ na ndị na-ahụ maka ọrụ na-ahụ maka ọrụ a. N'ezie, nwere ọtụtụ ohere ọhụrụ na Mumbai. Ya mere, ị ga-enyocha ọrụ ọrụ ọhụrụ. Ọzọkwa, deba aha gị na ụdị dịgasị iche iche. N'ihi na ọtụtụ ọrụ gafee Mumbai. Ụlọ ọrụ a nwere ike ịnye gị otutu otutu ihe kachasị elu choro n 'onu ahia n'ọdụ ụgbọelu. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ a na-enye ndị na-achọ ọrụ ọrụ n'efu.
Ọrụ No9 na Mumbai na Freshers World
E nwere onyinye ọrụ maka freshers na Mumbai. Ndị mmadụ gụchara akwụkwọ nwere ike ịchọpụta ọrụ ha na ụlọ ọrụ a. Ya mere, buru n'uche nke a, gbalịa ile anya. Na bulite CV ka frehsworld.com. Enwere otutu ebe ndị na-achọ ọrụ na saịtị a.
Ọrụ No10 na Mumbai na Randstad
Ụlọ ọrụ Randstad nwere ike inyere gị aka ọrụ na Mumbai. N'ihi na e nwekwara ọrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ a. Na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọrụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ njikwa na ego. N'aka nke ọzọ, mmanụ na gas na injinia. Ya mere, ọ bara ezigbo uru ile anya na izipughachi ihe mmalite.
Enweghị mmasị na ọrụ na Mumbai?
Malite ọrụ na Dubai
Kedu ihe dị iche n'etiti Dubai na Mumbai?
The Mumbai bụ Indian obodo ukwu. N’aka nke ozo, Dubai bu ihe ndi Arab mara Icon. Site na nke a na-eme ka obodo abụọ a pụọ ​​onwe ha. N'aka nke ọzọ, obodo Mumbai nwere ezigbo ụlọ ọrụ. Iji maa atụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ sitere na US nyefere ụlọ ọrụ ha na Mumbai City. Ma na Dubai, enwere nnukwu ohere maka òtù ndị Arab.
Ya mere, ọ bụrụ na anyị dabere na nke ahụ. Enwere nnukwu ihe dị iche. Dabere na obodo abụọ a. Maka ihe atụ Dubai City. Enwere otutu ihe maka ndi ndu. Nakwa ndị ọbịa ọhụrụ. Ya mere, ndị India si na-achọ ịkwaga UAE. N'akụkụ dị mma, a ga-etinye ọtụtụ n'ime ha. Ma ụfọdụ n’ime ha laghachiri Mumbai. Ọnụ ego nke bi na Dubai dị elu karịa ma ọ bụrụ na anyị na-atụnyere Mumbai. Ọzọkwa ụlọ na ọnụ ego ịdozi. Ọ dị oke elu na UAE. Karịsịa na mmalite nke ndụ ọhụrụ.
Mumbai bụ obodo India nke na-eto eto. N'aka nke ọzọ, ebe a nwere ọkwa dị iche iche na-akpata ego. Na Mumbai, enwere omenala omenala. N'aka nke ọzọ, N'ime afọ 20 gara aga. Obodo Mumbai aghọwo nnukwu ụlọ ahịa azụmahịa ụwa. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ụwa na-aga ebe ahụ. N'ihi a na-etinye ebe a maka azụmahịa. Na nnukwu ụlọ ọrụ nke ọtụtụ mba na ụlọ ọrụ na-abawanye mba, na-agbaba n'ime mba ụwa ụwa azụmaahịa ma na-eduga n'ịbawanye ụba na expats.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.